Ireo karazana blackjack eto Madagasikara | BlackJack77
Tena	/ Fiovana
Ireo Karazana Blackjack
Classic Blackjack: The Game Blackjack Essential
Blackjack classic no dikan-teny tsotra indrindra amin'ny lalao. Ao amin'ny jack black classic, ny mpilalao dia manjary miakatra tsikelikely amin'ny paikadiny, manaparitaka pairs ary indraindray dia manasaraka ny tanany indray mandeha indray. Ny mpivarotra dia voatery hitsangana amin'ny 17 saingy ao amin'ny trano fialokalofana sasany dia mety hitifitra 17 ny mavesatra ary miatrika mafy 17.
Fepetra tonga lafatra: fandresena fanampiny amin'ny fanaovana paoma
Blackjack Perfect Pairs, fantatra amin'ny hoe blackjack tonga lafatra, dia dika manokana amin'ny lalao izay tsy maintsy ataon'ny mpilalao roa eo amin'ny tanana tsirairay. Omeo mpivarotra roa ary aloavy isaky ny manomboka ny tananao voalohany!
Blackjack Progressive: Ianao no mpandresy Jackpot manaraka?
Toy ny lalao karajia mandroso, ny Progressive Blackjack dia kilalao izay manome loka manokana ho an'ny mpandresy vintana. Ankoatra ny fampiasana azy ireo ara-dalàna, manaparitaka ny jiro mivoatra ianao mba hametrahana paikady fanampiny izay manantena ny jiro mandroso.
Blackjack Tonga Lafatra Tsiroaroa
Hôpônina: Variana Maivana Indrindra Ho An'ny Fandriampahalemana
Ny Hôpitaly Blackjack dia mitovitovy amin'ny blackjack. Ny fahasamihafana lehibe amin'ny sarimihetsika katolika an-tserasera dia ny fahafahan'ny "mpividy" karatra, ka mamela azy roa heny ny karamany ary hanohy hitifitra na "hikorontana" avy eo, tsy toy ny firongotana.
Blackjack Switch: Switch eo amin'ny manodidina ary ataovy 21
Blackjack Switch dia dikan-teny tena malaza satria mamela anao ny mandefa karatra eo anelanelan'ny tanana roa, mahatonga azy ho tena mahafinaritra kokoa. Ny Blackjack Switch Card game dia azo tanterahina amin'ny aterineto ao amin'ny Blackjack Switch casinos ary koa miaina toy ny tabilao Blackjack Switch Las Vegas dia mahazatra sy malaza ao amin'ny Sin City.
Super Fun 21: Hetsika mahatsikaiky sy mahatsikaiky
Ny Super Fun 21 dia dikan-teny izay manampy trotra vaovao vaovao. Ao amin'ny Super Fun 21 Blackjack, mandresy ianao raha azonao atao amin'ny karatra 6 izay miisa 20 raha oharina amin'ny fanànan'ny mpivarotra. Ny 21 eo amin'ny mpilalao koa dia manafika 21 ny mpanafika amin'ny superfun 21 ary ny mpilalao dia afaka mizara ny tanana avo efatra heny ary koa ny dingana roa amin'ny fotoana iray. Azonao atao ny milalao baolina 21 ao amin'ny casinos amin'ny aterineto maro ary indraindray koa ny lalao dia atolotra any amin'ny toerana fanaovana casino manerantany.